राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
on: १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०६:२५ अर्थान्तर
महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग
भूपाल बरालको जन्म २०३५ सालमा सिन्धुलीमा भएको हो । उनले २०६२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनी २०५५ सालमा खरीदार पदबाट निजामती सेवामा नोकरी शुरू गरी २०७० सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । नोकरी अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत रहेर काम गरेको अनुभव उनीस“ग छ । उनी २०७४ भदौदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।
ऐनको प्रावधानमा कार्यान्वयनको अवस्था
राजस्व अनुसन्धान विभाग २०५२ सालमा स्थापना भएको हो । राजस्व चुहावट र अवैध व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा कर कानूनको परिपालना गराउने उद्देश्यले विभाग गठन भएको हो । अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागमातहत इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा गरी चारओटा क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागले पनि राजस्व छलीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने गरेका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा त्यस्ता कसूर गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन ल्याई सोहीअनुरूप अलग्गै विभागको स्थापना गरी क्रियाशील बनाएको हो । विभागको स्थापनाभन्दा अगाडि पनि अन्य विभाग र मन्त्रालयले समेत चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका काम गरिरहेका थिए ।
सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने सबै प्रकारका कर, दस्तुर वा शुल्क नै राजस्व हो । त्यो राजस्व कसैले छली गर्‍यो, बुझाएन वा देशलाई नोक्सान पुर्‍यायो या त्यस प्रकारको प्रयास गर्‍यो भने त्यसलाई हामीे चुहावट भन्ने गर्छौं । नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेका त्यसलाई चुहावटजन्य कसूर भन्ने गरिन्छ । यस्तो कसूरउपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरा ल्याउनु नै यस विभागको मुख्य कार्य हो ।
विभागले राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित कुनै जानकारी वा सूचना विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्ने र त्यो सूचना तथा जानकारीको विश्वसनीयता प्रारम्भिक रूपमा परीक्षण गर्ने गर्छ । यदि विश्वसनीय किसिमको सूचना रहेछ भने विस्तृत अनुसन्धान गरेर राजस्व छली गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम यस विभागले गर्छ । अनुसन्धानपछि सामान्य प्रकारका राजस्व छलीका मुद्दा ऐनले दिएको वा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गरी टुङ्ग्याउने गरेका छौं । ठूला र गम्भीर प्रकृतिका राजस्व छलीका मुद्दामा भने राजस्व चुहावट (नियन्त्रण तथा अनुसन्धान) ऐनबमोजिम सरकारी वकीलको राय लिई सजायको मागदाबीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएको छ । विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार तथा हुण्डीजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने तथा यस प्रकारको कसूरउपर अनुसन्धान गरी दोषी पाइए कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने यस विभागको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । कतिपय अवस्थामा विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार पनि तस्करी तथा अवैध व्यापारिक गतिविधिसँग जोडिने गरेको पाइएको छ । जसले सही तरीकाले व्यापार वा व्यवसाय गरेको छ त्यसले राजस्व अनुसन्धान विभाग र राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनसँग डराउनुपर्ने अवस्था छैन । राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसूर गरेको आधार प्रमाण पाइए मात्र कारबाहीको दायरामा आउने हो । राजस्व कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरीवाना गरी कसूरको मात्रा हेरी ३ वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने प्रावधान ऐनमा छ । चुहावटसम्बन्धी कसूरमा जरीवानाका अतिरिक्त कैदको समेत सजाय हुनसक्ने कानूनी प्रावधान रहेकै कारण यस ऐनलाई कडा कानूनका रूपमा लिने गरिएको देखिन्छ । यस प्रकारको कसूरमा आरोपीलाई अनुसन्धान अधिकारी र अदालतले सफाइ पेश गर्ने र आप्mना कुरा राख्ने प्रशस्त मौका दिने गर्छ ।
राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायबाट अहिले बजार अनुगमन भइरहेको छ । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै बजार अनुगमन गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार छापा मारी कागज प्रमाण नियन्त्रणमा लिने गरिन्छ । राजस्व छलीका सम्बन्धमा भने आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले यस्तो कारबाही गर्ने गर्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्राप्त सूचना तथा प्रमाणहरू सम्बन्धमा गोपनीयता राख्ने गर्छ । व्यवसायीको मानमर्दन नहोस् र कसूरदार सावित नभएसम्म सजाय भोग्न नपरोस् तथा सम्मानपूर्वक व्यावसायिक गतिविधि गर्न पाऊन् भन्ने सोचका साथ विभागले अनुसन्धान कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको यस विभागलाई हालैमात्र नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोे कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ । यो सकारात्मक विषय हो र यसले विभागको कार्य अझ प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढ्ने विश्वास लिएका छौं ।
राजस्व चुहावटका सूचना प्राप्त गर्ने र आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री किसिमले अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउने विषय चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन ठूलो रहेको मुलुकमा चुहावटको क्षेत्र पहिल्याउन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । तथापि, यो विभाग राजस्व छली नियन्त्रण गरी स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कार्यमा सक्रियताका साथ लागिरहेको बेहोरा जानकारी गराउँदै यस प्रकारका चुहावट वा छलीका सूचना विभागसमक्ष दिई सहयोग पु¥याउनुहुन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अनुगमन गर्ने निकाय धेरै भए
नेपालमा निजीक्षेत्रलाई अनुगमन र निरीक्षण गर्ने धेरै निकाय भएकाले समस्या हुने गरेको छ । एउटै काम धेरै निकायले गर्दा विकृति आउँछ । भन्सारले जुनसुकै बेला पोष्ट क्लियरिङ अडिट गर्नसक्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जति बेला पनि अनुसन्धान गर्नसक्छ । अन्तःशुल्क कार्यालयले पनि अनुगमन गर्नसक्छ । अनुगमन गर्न ठूला करदाता कार्यालयको पनि अधिकार हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि फाइल हेर्नसक्छ । अहिले त आपूर्तिले पनि अनुसन्धान गर्नसक्छ । वाणिज्य मन्त्रालय, आपूर्तिको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लेखासमितिलगायतले पनि अनुसन्धान गर्नसक्छ ।
एउटै प्रकृतिको काम फरकफरक निकायले गर्ने हो भने व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्दैन । एउटा व्यवसायीले कति निकायलाई खुशी पार्ने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै हुनुको कारण एउटै कामलाई धेरै निकायले हेर्ने भएर पनि हो ।
नेपालमा अनुगमन तीन उद्देश्यले हुने गरेको छ । यसमा पहिलो भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य, दोस्रो राजनीतिक चर्चा कमाउने उद्देश्य र तेस्रो गलत गरेरै अनुगमन हुने गरेको छ । यो देशलाई विकास गर्ने हो भने यस्ता अनुगमन गर्ने निकायबारे ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । रोजगार र राजस्वको कुरा गर्ने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजीक्षेत्रले सृजना गरेका छन् । यसरी देशका लागि योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई सरकारले अनुगमन गर्ने कार्यालय बढाउँदै लैजाँदा लगानी नहुने वातावरण सृजना हुनसक्छ । लगानीकर्ताले यति धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ भने शेयरमा लगानी र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा बैङ्कमा पैसा राखे भइहाल्यो नि ? त्यसैले अनुगमन हुने प्रक्रियामा फरक हुनुपर्छ ।
अहिले अर्को विकृतिका रूपमा के पनि आएको छ भने अनुगमन गर्न जाँदा पत्रकारलाई पनि लिएर जाने कार्य भइरहेको छ । अनुगमन गर्दा नै फैसला सुनाइदिने र पत्रकारले पनि लेखिदिने तथा व्यवसायीको मानमर्दन पनि त्यहाँ नै गरिदिने गरिएको छ । कानूनी राज्यमा यस्तो हुँदैन । गल्ती गर्नेका लागि कारबाही गर्न अदालत रहेको छ । जबसम्म कानूनले कसैलाई दोषी देखाउँदैन, तबसम्म ऊ अपराधी हुँदैन । आरोपीलाई अदालतमा गएर आप्mनो सफाइ दिने अधिकार रहेको हुन्छ । पहिले यस्ता घटना धेरै भएका छन् । केही महीनाअगाडि दरबारमार्गमा भएको घटनामा कसैलाई कारबाही गरिएन, मात्र चर्चाका लागि हल्ला फैलाइयो । अनुगमन गरेर मन्त्री हीरो भयो तर कारबाही कसैले गरेन ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने छापा हान्ने र अनुगमन अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई मात्र हुन्छ । अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको काम आन्तरिक राजस्व विभागको हो, जुन राजस्व अनुसन्धानमा देखाइएको थियो । भन्सारबाट सामान आउँदा भन्सार तिरेको छ कि छैन, त्यो मात्र जाँच हुने गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कसैको कार्यालयमा गएर खातापाता चेक गर्न बनेको होइन । त्यसका लागि त आन्तरिक राजस्व विभाग छ । तर, अहिले जुन तरीकाले सबै निकायले अनुसन्धान गर्ने काम गरेका छन्, त्यो गलत हो । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार तोकिएको छ । निजीक्षेत्रलाई अनुगमन मात्रै गर्ने ? अनुगमन गर्न पत्रकार लिएर आउनेबित्तिकै व्यापारीको मानमर्दन त भयो नि । अनुगमन गर्न आउँदा पत्रकारलाई रोक्ने मेरो कानूनी अधिकार छ कि छैन ? यस विषयमा प्रश्न उब्जिएको छ । अहिले हुने अनुगमनका लागि मैले हेरेर बस्नु कि व्यापार गर्नु ? जबसम्म निजीक्षेत्रलाई काम गर्ने सहज वातावरण दिइँदैन, तबसम्म देशको विकास हुने सम्भावना छैन । नेपालको कर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा धेरै छ । त्यो प्रायः निजी व्यवसायीले तिरेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले दैनिकजसो निजीक्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने निकाय थप्दै जाने ?
तजबिजी अधिकारमा कटौती गर्नुपर्छ
प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घ
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान र नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा केकस्ता कमजोरी देख्नुभएको छ ?
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान र नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार सानो रकम पनि चुहावट देखिएमा ४५ दिनसम्म हिरासतमा राखी सोको अनुसन्धान गरी अदालतमा लैजाने र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान सारै झन्झटिलो र अव्यावहारिक छ । त्यसकारण यस्तो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौं ।
के यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ? देखिन्छ भने कुनकुन दफामा केके संशोधन गर्नुपर्ला ?
ऐनका बुँदाहरूलाई यसको मर्मअनुसार अक्षरशः अध्ययनन गरी केकस्तो संशोधन आवश्यक छ भनेर भन्न अलि कठिन हुन्छ । तैपनि मैले अघि नै भने जस्तै ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने प्रावधान व्यावहारिक छैन । यसलाई संशोधनमार्फत व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
दफा २३ मा बिगोको दोब्बरसम्म जरीवाना गर्न सकिने तथा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेजस्ता प्रावधान निकै कठोर छन् । अनुसन्धान अधिकृतलाई दिइएको स्वविवेकी अधिकार पनि बढी छ । स्वविवेकी अधिकार बढी दिँदा पूर्वाग्रही भएर अन्यायपूर्ण निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण बिगोको दोब्बर जरीवाना लगाउने प्रावधान र स्वविवेकी अधिकारको प्रावधानमा संशोधन आवश्यक छ । अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई दिइने प्रोत्साहन रकमबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा त स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि बढी जरीवाना हुने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने स्थिति रहन्छ । सुराकीलाई जरीवानाको १५ प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्थाले पनि विकृति ल्याउने सम्भावना छ ।
त्यस्तै, दफा ३२ (क) मा कसूरदार ठहरिएको व्यवसायीलाई दण्डजरीवाना र कैदसजाय भइसकेपछि पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अन्यायपूर्ण हुन्छ । गरेको कसूरबापत बिगोको दोब्बरसम्म जरीवाना गराउने प्रावधान छ । त्यत्रो जरीवाना तिरिसकेपछि पनि उसलाई कालोसूचीमा राख्दा उसको भविष्य नै अन्धकार हुन जान्छ । के भोलि उसले सुध्रिएर काम गरी खान पनि नपाउने ? कालोसूचीको प्रावधानमा त कसूरदारलाई भोलि समाजमा स्थापित हुनै नदिने मनसाय देखिन्छ । त्यसकारण यो हटाउनुपर्छ ।
ऐनका सकारात्मक र नकारात्मक विषय केके देख्नुभएको छ ?
ऐनका सकारात्मक पक्ष के हो भने यो ऐन राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यले बनाइएको हो, जसले स्वतः राजस्व छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र छलिएको राजस्व पनि असुल्न मद्दत गर्ने हुँदा यो मुलुकका लागि अनिवार्य छ । हाम्रो भनाइ मात्र के हो भने ऐन सुधारात्मक हुनुपर्छ । अर्थात् यसले व्यक्तिलाई राजस्व छल्न निरुत्साहित गर्ने र छलि सकेको अवस्थामा पनि भविष्यमा त्यस्तो नगर्न प्रेरित गराउनुपर्छ । नकारात्मक पक्षहरू त मैले अघि नै उल्लेख गरिसके कालोसूची, बिगोको दोब्बर जरीवानाजस्ता प्रावधान ज्यादै कठोर छन् । सानोतिनो कसूरमा पनि ठूल्ठूलो जरीवाना, थुना र कैदको व्यवस्था छ । यो अलि व्यावहारिक भएन ।
वस्तु निकासी र पैठारी गर्दा राजस्व चुवावट ऐन कस्ताकस्ता ठाउँमा आकर्षित हुन्छ ?
निकासी पैठारीको क्रममा यो ऐनले भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्यअभिवृद्धि करसम्म छलिएको घटनालाई समेट्छ । प्रचलित ऐनअनुसार तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको वा कम तिरेको वा कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नै नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी बुझाउनुपर्नेभन्दा कम राजस्व बुझाएको वा छलेमा वा छल्ने प्रयास गरेमा यो ऐन आकर्षित हुन्छ । सामान ओसारपसारमा पनि यो ऐन आकर्षित हुन्छ ।
यो मुलुकका लागि र राजस्व छली नियन्त्रणका लागि आवश्यक ऐन हो । नेपालमा मात्र होइन, संसारका सबै मुलुकमा यस्तो ऐन छ । तर, कस्तो छ भन्ने मात्र हो । हाम्रो सवालमा कुरा गर्ने हो भने यो छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा बढी कठोर देखिन्छ । यसलाई अलि नरम बनाउनुप¥यो । व्यापार, व्यवसाय गर्नेले धेरैथोरै राजस्व छल्न खोज्छ । यहाँ मात्र होइन, संसारभरि नै यस्तो हुन्छ । तिनीहरूले हत्या, आतङ्कवाद, लागू औषध कारोबार, तस्करीजस्ता जघन्य अपराध गर्ने होइनन् । तिनले गर्ने भनेको धेरैथोरै पैसा नतिर्न खोज्ने हात्रै हो, जसलाई असुलेर सरकारी ढुकुटीमा भएको हानिनोक्सानीको शोधभर्ना गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यस्ता व्यवसायीलाई जघन्य अपराधीलाई झैं कठोर सजाय दिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
चुहावटमा कर्मचारीको पनि भूमिका
कार्यकारिणी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
राजस्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण ऐन २०५२ ले निजीक्षेत्रलाई केकस्तो असहज परिस्थिति सृजना गरेको छ ?
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विश्वका कुनै पनि राज्यले आआफ्नो आवश्यकताअनुसार ऐननियम बनाएका हुन्छन् । आजका विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने यस्तो ऐननियम अझ परिष्कृत रूपमा बनाइएका हुन्छन् र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको हुन्छ । त्यहाँ यस्ता ऐननियम निर्माण गर्दा निजीक्षेत्रसमेतको सल्लाहसुझाव लिई पर्याप्त छलफल गरी निर्माण गरिएको हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो भएको देखिँदैन । यसै कारण राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । राजस्व चुहावट निजीक्षेत्रको संलग्नतामा मात्र हुन सक्दैन । यस कार्यमा कुनै न कुनै रूपमा राजस्वका कर्मचारीको पनि हात हुने गर्छ । तर, सरकारले एक पक्षीय रूपमा निजीक्षेत्रलाई मात्र दोषी देखाउने गरिन्छ । व्यावहारिक रूपमा दुवै पक्षलाई कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । निजीक्षेत्रले यस विषयमा पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको छ । तर, यसतर्फ कुनै सुधार हुन सकेको छैन ।
निजीक्षेत्रले ऐनको कत्तिको पालना गरेको छ ?
निश्चय नै निजीक्षेत्रले उक्त ऐनको पालना गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रले सो ऐन वर्तमान समयका लागि उपयुक्त नभएकाले त्यसको संशोधन तथा सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको कुरा सम्पूर्ण मिडियालाई पनि जानकारी भएकै विषय हो । निजीक्षेत्रले ती ऐनविरुद्ध कहिल्यै आवाज उठाएको छैन । अपितु त्यसको समसामयिक सुधार गरिनुपर्छ भनेर मात्रै आवाज उठाउँदै आएको छ । विश्वमा कहीँ पनि निजीक्षेत्र बेलगामको हुँदैन । निजीक्षेत्र विभिन्न कानूनी प्रक्रिया पार गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । जुन देशमा जति खुला बजार प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ, त्यहाँ त्यति नै ऐननियमका अवयवहरूले निजीक्षेत्रलाई बाँधिएको हुन्छ ।
ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारी क्षेत्रले सहयोग वा असहयोग के गरेको छ ?
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले जुन किसिमले सो ऐनबारे उद्योगी व्यवसायीलाई जानकारी दिने र सुझाव लिने गरिनुपथ्र्यो त्यस्तो हुन सकेको छैन । प्रमाणित नहुँदै कुनै व्यवसायी दोषी देखिएको अवस्थामा नै सरकारले आरोपित व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने गरेको देखिएको छ, जुन कानून र न्यायकोे मर्मविपरीत छ । यो ऐन निजीक्षेत्रमैत्री नभएको आम उद्योगी व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको छ । नेपालले २०४७ सालदेखि घोषित रूपमा बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको हो । तर, सरकारले सो अनुरूप राजस्वमैत्री ऐनकानून निर्माण गर्न सकेको छैन । र, भएका ऐनकानून पनि परिमार्जन र संशोधन गर्न सकेको छैन । यसले बजारमुखी अर्थतन्त्रको सारअनुरूप निजीक्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा एकातर्फ देशको आर्थिक विकासको गति अपेक्षाअनुरूप अघि बढ्न नसकेको र अपेक्षाअनुरूपको राजस्व सङ्कलन पनि हुन नसकेको दोष स्वयम् सरकारले लिनुपर्ने देखिएको छ ।
ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषय केही देख्नुभएको छ कि ?
२० वर्षअघिको सो ऐनमा समसामयिक सुधारको खाँचो छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । विशेषतः निजीक्षेत्रले विवाद समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र गठन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यसका लागि आवश्यक सुझावहरू पनि दिइएको छ । पहिलो, कर अधिकृतले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावेदनका लागि निवेदन दिँदा ३३ प्रतिशत नगद धरौटी र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा ५० प्रतिशत नगद राख्नुनपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । दोस्रो, राजस्व न्यायाधिकरणमा कर अधिकृत सदस्यका रूपमा रहँदा निष्पक्षतामा आशङ्का हुने भएकाले स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने । तेस्रो, मिसम्याच र आयव्यय विवरण बुझाउन छुटेका करदाताका लागि पुनः एकपटक राहत ल्याउनुपर्ने । चौथो, राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसलामा नेपाल सरकार पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था हटाउनुपर्ने । पाँचौं, सार्वजनिक सुनुवाइलाई पुनः व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने । छैटौं, आर्थिक कसूरमा समेत फौजदारी कसूर लगाउन नहुने । सातौं, कर अधिकृतबाट परीक्षण भएको फाइलमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएमा परीक्षण गर्ने कर कार्यालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने । आठौं, कर परीक्षण गर्दा नियतवश गलत निर्णय गर्ने संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने । नवौं, विभिन्न सरकारी निकायबाट छानविन हुने गरेकोमा कुनै एक निकायबाट मात्र हुनुपर्ने आदि सुझाव हामीले दिएका छौं । हाम्रो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं ।
राज्यले खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको घोषणा त ग¥यो तर त्यसको मूल संवाहकको रूपमा रहेको निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउन चाहिने आवश्यक व्यवसायमैत्री ऐनकानून निर्माण गर्न सकेन । नेपालमा धेरै वर्षपछि बलियो सरकार देख्न पाएका छौं । सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको छ । अब केही हुनेमा हामी आशावादी छौं ।